जानिराख्नुस प्याजका फाइदाहरू | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
प्याज तरकारीका लागी अति नै उत्तम मानिन्छ । खालि खाँदा होस या तरकारी सँग मिक्स गरेर खाँदा होस, प्रायः मानिसलाई प्याज नभई खाना नै नरुच्ने पनी हुन्छ । तर यो खाँदा मुख गन्हाउने, निन्द्रा धेरै लाग्ने जस्ता समस्याका कारण कतिपय मानिस प्याज खाने कुरामा पछी हट्ने गरेको पनी पाईन्छ । कि खाँदै नखाने, खाएपछी धेरै खाने हुनाले पनी यसको सहि सदुपयोग हुन सकिरहेको मानिदैन । तर यस्लाई सन्तुलित ढँगले प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा यसबाट धेरै फाईदाहरु लिन सकिन्छ । जानिराखौँ प्याज खाँदा हुने केहि फाईदाहरु:
१. बोसो घटाउँछ
मानिसहरु आफ्नो माटोपन घटाउन बोसो पगाल्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा राख्छन् । त्यसको लागी मानिसहरु प्रायः योगा, मोर्निङ वाक,डाइटिङ आदि गर्छन् । तर प्याज ले पनी बोसो पगाल्न सहयोग गर्छ भन्ने कुराको बारेमा थाहा पाइराखेका हुँदैनन् । प्याजमा यस्तो गुण हुन्छ जस्ले सरिरमा भएको कार्बोहाइड्रेटलाई तताउँछ र बोसो पगाल्नमा सहयोग पु¥याउँछ ।
२. निन्द्राको लागी फाईदाजनक
प्याजमा पाइने फाइटोकेमिकल्सले निद्रा लाग्नमा सहयोग पु¥याउँछ । यदि तपाइँलाई अनिद्राले सताउँछ भने तपाइँले आजदेखी नै यस्को प्रयोग गर्नू अनिवार्य हुन्छ । खाँदा प्राय रातिको समयमा काँचो या त सुप बनाएर खाँदा फाईदाजनक हुन्छ ।
३.रजस्वला हुँदाको दुखाई कम
प्याज खानाले महिलाहरुको मासिक रजस्वला हुँदा हुने दुखाइलाई पनी कम गर्न मद्दत गर्दछ । महिनावरी हुुनु भन्दा ४–५ दिन अघिबाट खान सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ ।
४.चायाँ पोतो कम
प्याजमा पाइने भिटामिन ‘सि’ र एन्टिसेप्टिक तत्वले मुहारमा आउने चायाँलाई कम गर्दछ । मुहारमा मात्र नभई सरिरको जुनसुकै भागमा आउने दाग–धब्बा पनि हटाउँनमा मद्दत गर्दछ । त्यसकालागी प्याजलाई दहिमा मिलाएर स्किनमा लगाउनु पर्दछ । प्याजको भित्र पट्टिको कलिलो भागको स्लाइसलाई मुहारमा लगाउना ले पनी फाइदा गर्दछ । साथैमा मुहारलाई चम्किलो बनाउन मद्दत गर्दछ ।
५.क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ
प्याजले क्यान्सर जस्ता प्राँणघातक रोगहरुबाट बच्नपनी सहयोग गर्दछ । यस्ले घाँटी, टाउको र गलाको क्यान्सरबाट बचाउँछ । साथै ग्यास्टिक वा प्रोटेस्ट क्यान्सर हुने खतरबाट पनी जोगाउँछ । प्याजमा पाइने यस्तो तत्वले क्यान्सर का सेलहरु निर्माण गर्नमा रोक्छ ।
६.इम्युनिटी पावर बुस्ट गर्छ
प्याजमा पाइने फाइटोकेमिल्सले शरिरमा भिटामिन ‘सि’ को असर बढाउन सहयोग गर्छ । यो केमिकलका कारण भिटामिन ‘सि’ लाई सरिरमा राम्रो सँग प्रसारण गर्दछ । जस्ले गर्दा इम्युनिटी पावर बढाउनमा सहयोग गर्दछ ।
७.कपालका लागी उत्तम
फुलेको र कडा कपाललाई प्याजले राम्रो असर गर्दछ । यस्ले कपाल सेतो हुनबाट बचाउँछ । कपाल झर्नबाट रोक्न होस या कपाल लामो बनाउन प्याजले निकै मद्दत गर्दछ । महिनामा एकचोटी प्याजको रस लगाउनाले कपाल साइनिङ बनाउन उहयोग गर्दछ । प्याज कपालको उपचारको लागी पनी राम्रो चिज हो ।
फागुन २१ गते, २०७१ - १९:२३ मा प्रकाशित